December 2017 - Ceelhuur Online
December 31, 2017 Hafsa Haji225
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay si rasmi ah ugu dhaqaaqi doonto kubadsameeyaha Liverpool Philippe Coutinho isbuuca oo furmaya suuqa kala iibsiga bisha Janaayo. Kooxda reer Catalan ayaa xiiso weyn uqabtay Coutinho, waxaana ay ku guuldareysatay seddex lacag oo l ay ku dooneyso ciyaaryahanka reer Brazil xagaagan, inkastoo ciyaaryahanka uu cadeeyay inuu doonayo inuu u […]
December 31, 2017 Hafsa Haji226
Weeraryahanka Manchester City Gabriel Jesus ayaa laga yaabaa inuu muddo dheer maqnaado ka dib markii dhaawac jilibka ah uu soo gaaray kulankii todobaadkan ee horyaalka Premier League la ciyaareen Crystal Palace. Jesus ayaa si aad ah u dhacay daqiiqadii 11-aad ee kulankii Selhurst Park, laakiin markii hore wuxuu isku dayay inuu sii ciyaaro. Si kastaba […]
December 31, 2017 Hafsa Haji213
Real Madrid ayaa xaqiijisay in Karim Benzema uu ka maqnaa tababarkii sabtida, sababtoo ah dhaawac muruqa ah oo soo gaaray isagoo maqnaan doono waqti aan la cayimin. 30 jirkaan ayaa ka maqnaa kooxda Los Blancos tababarkii shalay, taasoo keentay in laga baahiyo warar la xiriira suuqa kala iibsiga bisha Janaayo oo furmaya Isniinta. Madrid ayaa […]
Guddiga Joogtada Ee Golaha Shacabka oo ku gacan seyray soo jeedintii Xeer Ilaaliyaha Qaranka!
December 31, 2017 December 31, 2017 Cali Yare243
Guddiyada Joogtada ee Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kulan uu maanta ku yeeshay Xarunta Villa Hargeysa ka soo saaray Qaraar ku aadan xasaanad ka qaadista Xildhibaano uu dhowaan soo eedeeyay Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Dahir. Kulakan oo uu shir guddoominayay Guddoomiye Jawaari ayaa waxaa laga soo saaray […]
Taliyaha Qaybta 21-ad Oo Shacabka Mudug ku Amray Inay Hubka Xareeyaan.
December 31, 2017 Cali Yare235
Col. Cabdullahi Cirro oo ah taliyaha qaybta 21aad ee xoogga dalka ayaa ka hadlay sida ay u dhacday shaqaaqadii suuqa magaalada Galkacyo isaga oo sheegay in ay tahay arrin aan la fileyn oo dhacday. Ciidamo Puntland iyo Galmudug ka soo kala jeeda, ayaa isku rasaaseeyay Suuqa Magaalada Gaalkacyo, waxaana halkaasi ku dhintay laba ruux. “Iyada […]
December 31, 2017 Cali Yare236
Al-shabab ayaa sheegtay in shan ka mid ah Ciidamada Amisom ay ku dileen Qarax saaka ka dhacay Waddada Warshadaha ee Magaalada Muqdisho. Al-shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda qaraxa ayaa intaas ku daray in gaariga Ciidanka Amisom ee la qarxiyay uu ku bur buray weerarkaas,islamarkaana askarta dhimatay ay arkeen xubno ka tirsan Al-shabaab oo deegaankaas ku sugnaa […]
December 31, 2017 Cali Yare246
Guddoomiye ku xigeenkii hore ee Baarlamaanka dalka Kenya Faarax Macalin ayaa ka hadlay xiisada siyaasadeed ee ka jirta dalka Soomaaliya waxana uu ugu baaqay dowlada Soomaliya inay xirto safaarada iyo xarumaha lagu tababaro ciidamada ee ay dowlada Imaaraadka Carabta ku leedahay magaalada Muqdisho. Siyaasiga Faarax Macalin ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fikirka uu ka […]
December 31, 2017 December 31, 2017 admin263
Hay’adda Culmada Soomaaliyeed Oo Ka Digtay in Dalka Uu Galo Qalalaase Siyaasadeed , Kaddib Weerarkii Ciidan ka tirsan Dowladda Federaalka ay ku qaadeen Guriga Senator Cabdi Qaybdiid. Subcribe Our Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UCXm-…
December 31, 2017 Cali Yare370
Senatorada Aqalka Sare ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa ay ka doodayaan Miisaaniyadda Dowladda ee 2018 iyadoo hore Baarlamaanka Soomaaliya ay u ansixiyeen miisaaniyada. Miisaaniyadda ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka horaantii bishan December ayaa waxaa ay gaareysaa 274 malyan oo dollar. Hase yeeshee ansixinta miisaaniyada ayaa waqti ku qaadatay xildhibaanada baarlamaanka balse lama oga inta ay […]
December 31, 2017 Cali Yare260
Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Dowlada Federalka C/raxmaan Cumar Cusmaan Eng. Yariisow Wasiirka Soomaaliya ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay ka jawaab celisay falkii lagu weeraray guriga Senator Cabdi Xasan Cawaale. Wasiirka Warfaafinta ayaa sheegay in si deg deg ah loo fuliyay amarka madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ee ahaa in si dhaqsi ah loo baaro […]